नेपालको बिकास किन हुन सकेन ? विस्वको कुनै पनि देश आँफै बिकास भएको पक्कै पनि होइन, त्यस ठाउँ वा देशको भौगोलिक बनावटले केही हदसम्म काम गरेको हुन सक्छ तर के नेपालको बिकास म यती धेरै पछाडि पर्नु म ठाउँ र भौगोलिक बनावट नै दोशी हो त ? के यो भनेर हामी पन्छीन मिल्छ । म नेपाली भको र नेपाल मै रहेर काम गरी रहेको ब्यक्ती जो एक पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची म जन्मेको । म त्यो अवस्था मा हुर्के जुन समयमा देश गृहयुद्ध मा होमिएको थियो । दिनदिनै त्रासमा बाच्नु पर्थ्यो । घरमा अभिभावक विद्यालय बाट बच्चाबच्ची नफर्कुन्जेल के भो भन्ने डराउने अवस्था थियो अलिकती ढिलो गर्‍यो भने माओवादीले लगे कि आर्मिले मार्यो भनेर रुँदै बस्ने अवस्था थियो । बिकास निर्माण को कुरा नै गर्ने हो भने पहाडी जिल्लामा सबै भन्दा अगाडि हाम्रो जिल्ला नै पर्न आउछ किन ? किनकी हामी सचेत छौ हाम्रो जिल्ला मा अरु जुल्ल म जस्तो भ्रस्टाचार हुन पाको छैन । भ्रस्टाचार हुँदै नहुने भन्ने छैन हो हुन्छ बिस्व को अत्यन्त बिकसित मुलुकमा पनि भ्रस्टाचार हुने गर्छ तर नगन्य रुपमा ।
हाम्रो देशमा बिकास हुन नसक्नु को मुख्य कारण भनेको नै भ्रस्टाचार नै हो । हाम्रो देश भ्…